ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ရေးသားလာတဲ့ ခရစ်စတီးနားခီရဲ့ စာလေးတစ်စောင် – Update News
ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ရေးသားလာတဲ့ ခရစ်စတီးနားခီရဲ့ စာလေးတစ်စောင်
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ သက်တမ်းနုပြီးတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကို ထိရောက်စွာဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တာကတော့ ခီမောင်နှံတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ခရစ်စတီးနားခီကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို မင်းသားတင်ရိုက်ပြီး ကိုယ်တိုင်က ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီး ထက်မြက်တဲ့ အိမ်ရှင်မကောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်.
ခရစ်စတီးနားခီနဲ့ ဇာဏ်ခီတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ ရုပ်ရှင်ကား အနည်းငယ်နဲ့တင် မတူကွဲပြားစွာ ထိုးမြောက်နိုင်တာကြောင့် သူတို့ရဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို စောင့်မျှော်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ သူတို့ မိသားစုဟာ အာရှနိုင်ငံတခုမှာ
ရောက်ရှိနေပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ဇဏ်ခီကတော့ ထိန်းသိမ်းခံရချိန် ကာလတုန်းက ဆေးကုသခွင့်မရတဲ့သူ့ရဲ့ နဂိုရောဂါအခံဖြစ်တဲ့ အရိုးအကြောရောဂါကပိုမိုဆိုးရွားခဲ့တာကြောင့် လက်ရှိမှာ အခုရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီနေ့လေးမှာတော့ ခရစ်စတီးနားခီက ” “မချမ်းသာသော်လည်းပျော်ပါသည်”ဘာမှမပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံမှာ အားလုံးဟာမချမ်းသာပေမယ့်(တချို့သူတွေကလွဲလို့)ပျော်အောင်နေကြရတယ်။ သူများနိုင်ငံနဲ့ယှဉ်ရင် ဘာအခွင့်အရေးမှ မရကြတာ နိုင်ငံအပြင်ထွက်တဲ့သူတိုင်းအသိ…
ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ရေ ကိုယ့်မြေမှာပဲ အေးချမ်းစွာနေချင်ကြတယ်…မိမိချွေးနဲစာနဲ့ရှာဖွေတည်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကို စွန်ပြီး ပြေးရတဲ့ဒုက္ခဟာဘယ်လောက်ကြေကွဲစရာကောင်းလိုက်လဲ…အိမ်နဲ့ယာနဲ့ဘဝကနေ အိမ်ယာမရှိ၊ဘယ်သွားလို့ဘယ်နေရမှန်းမသိ …ဒီသောကတွေကုန်သွားမယ့်နေ့ ရောက်ကိုရောက်လာမှာပဲဆိုတာယုံကြည်ပါ။
အားတင်းထားပါ။Your pain is our pain too.” ဆိုပြီး သူမရဲ့ Instagram မှာရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်း ထန်တလန်မြို့လေးအတွက် ဆုတောင်းပေးကြပါအုံးနော်….